Iinkampani amanyeneyo - Ningbo Nide Mechanical Co., Ltd
umgca wemveliso Armature
Armature zokuvala machine iphepha ukufaka
Alubi machine uyifake
Armature Umatshini oyinkampani
Shaft Umatshini ngokucindezela
cover End ngokucindezela machine
Commutator Umatshini ngokucindezela
Commutator machine indawo iwelding
Armature Umatshini ukulingana
Armature machine ukumitha varnishing
Armature machine powder enamathela
machine uvavanyo Armature
Aluminium machine die eyahlulayo
machine production Stator
Stator Ukwambathisa machine iphepha ukufaka
Inaliti Umatshini oyinkampani
Stator Umatshini oyinkampani
Stator oyinkampani ngokufaka machine
Middle Umatshini bokwakha
Final Umatshini bokwakha
Stator machine powder enamathela
Stator machine ukumitha varnishing
panel Stator uvavanyo
Nide iye ezilandelayo neenkampani ezingamalungu
Sise Hi-Tech District e Ningbo komzi, kumbindi woshishino China, wazithabatha ukugqithisela qela luliqilima zobugcisa kunye nezorhwebo, Ningbo Nide Mechanical izixhobo Co., Ltd igxininisa R & D, ukuthengisa & intengiso, ulawulo umgangatho emva kwenkonzo koomatshini leyo ziveliswa mveliso iNumsa (Jiangsu Nide yokuZenzekelayo Tech Co., Ltd kunye Jiangsu Xiandian Mechanical Co., Ltd.
Ngaphandle koomatshini kwisakhiwo endlwini, elawulwa nenkqubo zobulunga kunye nenkonzo, Nide mechanical ikwabonelela ezinye oomatshini abancedisayo ezifunwe kwezinye abenzi zobungcali kubathengi bayo. Injongo kukunciphisa abathengi umsebenzi eyongezelelweyo kwaye iintsizi wokukhutshwa esemgangathweni.
Nide-ofisi e-Indiya, Brazil, Korea, Turkey, kunye Argentina, intengiso elungileyo kunye nenkonzo umsebenzi net ukuvumela ukuba ukufikelela kunye ukunikela inkonzo kubaxumi ihlabathi lula yaye ngokukhawuleza. Ukuthembeka, uxanduva kunye ekhawulezayo asabela uncedo Nide ukuphumelela ukuqiniseka abathengi ehlabathini 'seccesively, ngoko iimveliso kude Nide uye walungiselela ukuya kubathengi bawo kumazwe angaphezu kwama-40 ezifana eJamani, eItali, eSpeyin, France, Turkey, India, Brazil, Vietnam, Mexico, Agentina, eUnited States, ect, abaxumi ezininzi lowo ezikhokelela entsimini yayo.
Iminqweno yethu ukubonelela abaxumi bethu ubuhle pack epheleleyo kwesisombululo motor iimveliso.
Ifunyanwa e Suzhou, equka indawo kumasifundisane 9,000 square metres, kunye 102 umsebenzi, Jiansu Nide yokuZenzekelayo-Tech Co., Ltd ikakhulu ukuvelisa eme ecaleni kumatshini kunye nomgca oluzenzekelayo ngokupheleleyo induction motor stator, BLDC motor umatshini jiko, oomatshini imveliso plane yangaphandle, plane ibandla line, motor umgca indibano kunye nezinye wena umatshini okanye imveliso umgca.
Iimveliso ikakhulu isicelo abangatshatanga kunye kwesigaba sesithathu motor induction, impompo yamanzi iimoto, kumatshini wokuhlamba iimoto, imeko umoya iimoto, fan iimoto, compress injini, yombane motor ibhayisekile, BLDC injini, servo injini, injini yombane ngomatshini, njl ezinye zethu neemveliso CE ezivunyiweyo.
Ngokungqongqo ukuphumeza ISO 9001system, baxhotyiswa kwisibonelelo eliphezulu ngqo machining, siya kuqinisekisa iimveliso zethu ukuhlangabezana oko iimfuno ngqo abathengi '.
3.Zhejiang Nide Okrelekrele yokuZenzekelayo Co., Ltd
Zhejiang Nide Okrelekrele yokuZenzekelayo Co., Ltd, nto leyo ngokupheleleyo-owned yi Ningbo Nide Mechanical Equipment Co., Ltd, ehleli hub kwisixeko industrial Ningbo, ikakhulu kugxininisa zakutshanje ngokubhijela kunye nebandla nobuchwepheshe zonke iintlobo BLDC kweemoto, kubandakanya ngamatye umatshini kunye nomgca ngokupheleleyo automatic ngokupheleleyo. Okwangoku, nathi ngokusesikweni ezinye oomatshini non-standard ukulungiselela abaxhasi iimfuno entsimini lokuvelisa motor.
inkqubo yolawulo lomgangatho engqongqo, kunye qela luliqilima zobugcisa ukuvumela ukuba ukunikela oomatshini ethembekileyo kubathengi bethu. Ifilosofi "Service, Profession, Cela, ngokunyanisekileyo" kusinceda sithandwe umthengi.
Nide-nje kuba lula, kuba zama ukwenza kuphela motor lemveliso lula, umthengi lula, kodwa kubetha lobomi elizayo lula!
Elise Hengshan qiao ndawo intle, kwiphondo Changzhou, Jiangsu, nesambatho ummandla 15000 square metres, Jiangsu Xiandian Mechanical Co., Ltd ezizodwa micro-motor (umatshini series, umatshini DC) Imveliso armature oomatshini zemveliso. Sivelisa uluhlu olupheleleyo yemveliso armature eme ecaleni oomatshini abazisebenzelayo ngokupheleleyo umgca armature ibandla, ezifana nesibili ngokucinezela umatshini, iphepha yokugquma uyifaka umatshini, armature jiko umatshini, nesinqumka umatshini uyifake, commutator umatshini Bhubane, commutator umatshini ukwala, armature balancing umatshini, uvavanyo armature panel, stator umatshini jiko, njl
Iimveliso zisebenza ikakhulu zasendlini, imoto, isixhobo amandla, njalo njalo Xa armature lokuvelisa intsimi Umatshini, inkampani yethu yenye abenzi ikhokela eTshayina, yaye ngokulandelelana sinikwe "Hi-Tech Enterprise" ngurhulumente.
Sikubo phambili ...
Behleli eselunxwemeni lolwandle esihle isixeko-Ningbo, ukuthatha uncedo yoveliso oluqhubele kumashishini hub, Supply Chain ogqibeleleyo kunye nokuthuthwa lula, kwaye luhlanganisa liqela leengcali kunye namava lokuveliswa osisityebi, Ningbo Haishu Nide International Co., Ltd igxininisa kwanikwa uhlobo olwahlukileyo amacandelo motor kubaxumi bethu.
Le mveliso ziquka commutator, ethwele ibhola, nesibili, carbon ngebrashi, iphepha yokugquma, umkhuseli thermal, umazibuthe, fan, isiciko ngeemoto lamination. Ngaphandle kwezi mveliso, nathi kwakhona ukunika le nkonzo motor lemveliso zobugcisa umcebisi, inkxaso yeprojekthi babuye-iqhosha projekthi.
Kunye namashumi amava endle lokuveliswa, baqonde ukuba umthengi kanye imfuno, a amacandelo motor inkqubo ebalulekileyo lemveliso net umsebenzi kunye engqongqo umgangatho yolawulo ukuvumela ukuba ukunika umxumi yethu kunye neemveliso umgangatho ngexabiso elifanelekileyo thina kakhulu, injongo yethu kukunceda abathengi ukuba ukunciphisa nasekukhangeleni ingcinezelo kum ngexesha yokufumana iimveliso eliphezulu.
Nide inqwenela kukunika abathengi kwihlabathi jikelele kunye inkonzo enye ngenxa lokuveliswa. Yenza motor, nibuyele Nide, yonke into aya kuba lula!
14-5, East Kemao Centre, No.100 Xiangyun Road, District Hi-zobugcisa, Ningbo 315040, China.